Mhlawumbi sonke kuthi ebuntwaneni bethu sinobubele obunomxholo obalulekileyo wencwadi ethi "The Kid and Carlson." Le nkwenkwe yayinomdla kakhulu ngokufumana inja! Kwaye emva komhla omnye omhle kwiminyaka emininzi kamva umntwana wethu uqala ukusijikeleza kunye nezicelo ezifanayo zokumthengela umhlobo onamagxa amane. Indlela yokuziphatha ngokuchanekileyo? Yintoni ebalulekileyo ukwazi, ukugqiba ukuphendula kwisicelo somntwana? Abantwana abancinci kunye nezilwanyana ziyinhloko yomxholo wanamhlanje.
Kubukeka kwindlu yezilwanyana abazali abaninzi babona kuphela iingxaki. Ingaba umntwana uya kukwazi ukujamelana nemisebenzi eyongezelelweyo, okanye umntu uya kuphinda awele emagxeni kamama? Ngaba onke amalungu omndeni aya kulawula ngomhlobo omtsha? Kwaye, ekugqibeleni, akuyingozi yini kumntwana? Nangona kunjalo, konke oku - ukwesaba abazali, ukungathandabuzeki okungenakuthenjwa kunye nemibuzo - akusisona isizathu sokuphika i-chadushka yokufumana inja (ikati, umvundla, i-fishfish). Ukukhetha nje isilwanyana omele ufike kuzo zonke iimbopheleleko.
Qalisa kuphela izilwanyana ezinjalo, oko umntwana angakhathalela ngokuzimela. Ukufumana isikolo esikolweni, inketho eyona nto iyinto encinci. Nangona abantwana abancinci banako ukutshintsha i-litter kwi-cage baze bathululele ukutya kwi-feeder. Enyanisweni, ekuqaleni kufanele wenze konke oku ngaphantsi kolawulo lwabantu abadala, kodwa kamva uya kuba nako ukunyamekela inkathalo yokunyamekela isilwanyana kumnikazi wakhe omncinci. Iigobhi zaseGuinea zikhethiweyo kuma-hamsters kunye neeratsti ze-ornamental - ngokungafani neentonga ezininzi, zikhokela ubomi bemihla ngemihla kwaye, ngokutya nokugcina kakuhle, zihlala iminyaka eyi-6-8.
Ukuba unomntwana wesikolo esikolweni esiprayimari, ungaqala ikati. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba ukhetho lohlobo lufanele lukhokelwe ngqiqo. Iikhathi ezinomvumba ezide, kunye nee-curls zaseMelika kunye ne-sphinxes e-bald zidinga ukunakekelwa okhethekileyo. Ngenxa yempilo yabo, kuyimfuneko ngokufanelekileyo ukufezekisa inkqubo yokucoceka ngokufanelekileyo: ukudibanisa, ukuhlamba (oku kubhekisela kwi-sphinxes), ukusika izihlunu. Ukuba awukwazi ukumelana nokutshabalalisa komntwana, kuya kufuneka ukwamkele into yokuba kuya kufuneka ukuba unakekele isilwanyana esinjalo.
Ukuba umntwana wakho sele sele eneminyaka elishumi ubudala, unokucinga ngokuthenga inja. Ngokutsho kwe-cynologists, eli lixesha elifanelekileyo lokuthenga umhlobo onamagxa amane. (Labradors benza ikhefu - bahamba kunye nabantwana abaneminyaka elilodwa.) Kule minyaka umntwana uyakwazi ukuhamba nenja ngokwakhe, ukuqonda izinto ezisisiseko zoqeqesho phantsi kolawulo lwabantu abadala. Ekugqibeleni, kwiminyaka elishumi umntu uhlala enezakhono ezisisiseko zentlalo, kwaye unokuba yinja yegunya, inkosi eyiyo, inja leyo ayiphulaphulayo kwaye ikholelwa.
Akulungele abantwana abancinci ukuba bachaze ukuba kutheni ikati inqabile ukulala embhedeni yombhobho, kwaye i-parrot ayikwazi ukunikela isandwich. Ukuba umntwana wakho ngaphambi kokubona isilwanyana sakhe sibona iilwanyana ezikulo mifanekiso kunye nemifanekiso, mhlawumbi uya kuyiphatha into entsha yokudlala. Umsebenzi wakho kukuchaza ngokucacileyo umahluko.
Qinisekisa ukutyelela abahlobo abanemfuyo endlwini: makangabone umntwana ukuba abanxibelelwano kunye nabanikazi bezilwanyana zabo, indlela abadla ngayo, indlela abayithatha ngayo ingalo zabo, indlela yokulala ehlelwe ngayo. Thenga i-CD enefilimu eyaziwayo malunga nendlela izihlobo zezilwanyana ezifuywayo zihlala kwintlango, zibone kunye nomntwana, ingqalelo ngokuziphatha kwezilwanyana. Zonke izinto eziyimfuneko zokugcina isilwanyana (i-cage, iifuni, indlu yangasese, njl.) Kufuneka zithengwe ngomntwana. Cacisa injongo yesifundo ngasinye, bonisa indlela yokuyisebenzisa. Umntwana wakho kufuneka azi ukuba isilwanyana asiyena umntu, kwaye akukho silwanyana esinokuyithanda into efanayo njengoko sinayo.
UKUPHILA KWENKQUBO: INDLELA YOKWENZA NAKO
Enye yeengxaki ezinzulu apho, maye, abazali bahlala bedibana, kukuhlaselwa kwezilwanyana zasekhaya ezijoliswe kumntwana. Uyakuphepha njani imeko elolo hlobo? Kulula kakhulu: kufuneka ufunde ukuba yonke into incike kuwe. Inyaniso kukuba nathi ngamaxesha ngamaxesha sifaka isilwanyana kwiimeko ezivusa ukuziphatha okubi. Ngaloo ndlela, iingcali zikholelwa ukuba intlobo nganye yeenja kufanele isetyenziswe injongo yayo: i-watchdogs - linda indlu, ukuzingela, njl njl. Kodwa abanye abazali bayakulibala malunga nale nto kwaye bazama ukufumana uhlobo lwenkqutyana "ezimbini kwiyodwa": bafuna inja kunye namasela ukuba alinde, kwaye ngexesha elifanayo kwakumntwana oyingqiqo kunye nomnene ngomntwana omncinci. Ayenzeki! Ukuphoqeleka inja ukwenza into engenziyo, kunye neyiphi iqoqo elipheleleyo lezakhi zakhe zofuzo ngokukhawuleza, abanikazi bamzisela nje ukuphazamiseka kwemihlaba. Ubani oya kuba nomphumela wokucasula? Kakade ke, lowo usikhathazayo kakhulu. Lo ngumntwana.
Isizathu sesibini sobundlobongela yingxaki engozini yengqondo kwintsapho. Ingaba inja iyaluma umntwana omncinci? Mhlawumbi, uphindaphinda nje ukuba yonke imihla uhamba phambi kwamalungu onke entsapho. Ukuba umntwana uphakanyiswa ngokungapheliyo ngelizwi (ukukhwaza, ukusuka kwimbono yejaji), bajika kuye ngegama lokusongela (i-growl) kunye ne-spank (inja-bite), isilwanyana siphetha: le yinto efanelekileyo ilungu elincinane lepakethi , isiqhelo sokuziphatha kwaye oku kuvumelekile kubo bonke. Ngako oko, phambi kokuba ugxeke inja, cinga malunga nokuba akukho mifanekiso eninzi kakhulu edlalwa kwintsapho yakho.
Ikati ephilileyo inokufaka iifayile kunye namazinyo kumntwana omncinci kuphela kwiimeko ezimbini: mhlawumbi ukwesaba ukufa okanye oku kuyindlela yokugqibela yokumisa umntwana ukuba angenzi nto engathandeki kuye. Iikati ngokuqhelekileyo zibonisa ubundlobongela kubantwana, abantu abadala abavumela yonke into. Ngaphambi kokuba ukhulule iiflawu, ikati iya kuhlala inika intshaba ithuba lokuyicinga kunye nelobe kuye. Ukuba umntwana engazange akuve, ke akayiva abantu abadala, nokuba kunjalo, abawuthathi amagama abo ngokungathí sina, xa bebaleka kwiminqweno yakhe.
"Abadala bama-animal" abathandi bezilwanyana babethandwa ngokubizwa ngokuba yizilwanyana, bathathwe esitalato. Akuqhelekanga ukuba umntwana eze ne-puppy yesitrato okanye intaka endlwini. Umsebenzi wakho ukuphendula ngokufanelekileyo kulo mcimbi. Okokuqala, musa ukwenza i-scandals, kwaye, ngokubaluleke kakhulu, musa ukuphosa isilwanyana kwisitalato! Chaza kumntwana ukuba unyamekela ilungu elitsha lentsapho liya kulahla emagxeni akhe. Ewe, inkunzi iya kukuqinisekisa ngokufudumele ukuba oku kuya kwenzeka. Misele yena kunye nesilwanyana ixesha lokuvavanya, zithi, iiveki ezimbini. Ukuba umntwana uzalisekisa izithembiso zakhe, kufuneka umntu ashiye isilwanyana. Ukuba akunjalo, fakela kwiinkedama, kwizandla ezilungileyo zesibhengezo (nje musa ukubuyela apho ivela khona!)
Ukuhlolisisa ngokukhawuleza umfokazi onamaqhina amane: unayo nayiphi na imfihlelo evela kwamehlo, impumlo, inqabileyo "ukungcola" ezindlebeni, kwiintloko, okanye kwiidumba? Kwiimeko ezininzi, into eluhlu kulitrato yesitalato, ngelixesha, kuya kufuneka. Unokukhetha unalo - ugqirha wezilwanyana kwaye ngokukhawuleza. Unokumbiza naye ekhaya.
Ngaphambi kokutyelela ugqirha, fanisa izinga lokushisa kwizilwanyana (i-thermometer kufuneka ifakwe kwi-2-3 cm kwisithuba sokuvula kunye nokugcina imizuzu engama-3-5), kwiimeko eziqhelekileyo, akufanele ifike kwii-degrees ezingama-39.
Ukuba akukho zibonakaliso zangaphandle zesifo, oku akuthethi ukuba ingozi ayizange iqhube kwindawo ethile "ngaphakathi". Qaphela ukuziphatha kwesilwanyana - isilwanyana esinempilo kufuneka sisebenze. Ngokuqinisekileyo, kwindawo entsha unokunkwantya, kodwa inzululwazi kufuneka ibhekise phambili, kunye nesidlo esifanelekileyo.
Ukutya okufunyenweyo kukuphuculweyo iimveliso zendalo - ukuguquka okubukhali kwindlovu eyenziwe ngokufanelekileyo kunokubangela ukugulisa ukutya. Imenyu kufuneka ibe nemveliso ebilisiwe yenyama, i-rice porridge, i-cottage cheese, i-kefir, imifuno.
Ngaba ufumene iimpawu ezikhankanyisayo okanye awukho, nayiphina "ipodrugrantsu" iya kufuneka ilandelelaniswe uchungechunge lweenkqubo zokukhusela kunye nezempilo. Kwi-arsenal yakho kufuneka ibe neendlela zokulungisa izilwanyana ezinqabileyo kunye ne-anti-blockade, i-shampoo yezilwanyana. Emva kokuba uqhube iimpompo, isilwanyana kuya kufuneka ukuba ugonywe kwikliniki yezilwanyana. Ngaphambi kokugonywa, awukwazi ukuhamba naye kwisitalato!
Sonke sivile malunga neenkohlakalo ezintshatshazi kunye nabantwana abancinci kakhulu abanokuthi bahlonele izinambuzane, iintshontsho, iintsapho ... Yintoni omele uyenze xa ukhathazeka ukuba uqaphele ukuba umntwana wakho ubonisa ubugwenxa? Ubudlelwane phakathi kwabantwana abancinci kunye nezifuywayo zingafani. Ukuba umntwana wakho uyakrazula imilenze yeenkumbi, izichukumisi zogcino okanye uzama ukuphakamisa inqanawa emoyeni ngomsila - fumana isizathu. Ukuba liba nomlingiswa womdlalo okanye uvavanyo, kuyimfuneko ukuchazela umntwana ukuba zombini izilwanyana kunye nezinambuzane ezincinci zinokuba zibuhlungu kwaye ziyikrakra. Tshela umntwana ukuba lihle kangakanani ihlabathi lezilwanyana kunye nezinambuzane, ukuba ziphelele kangakanani, zisebenza nzima, zidlala. Chaza ukuba uthando, kuquka nabazalwana bethu, ngokuyinhloko lukulungele ukukunceda nokukhusela. Kubi kakhulu xa umntwana wakho efumana ulonwabo olucacileyo kwindlobongela kwaye ubudlelwane bakhe nezilwanyana bubuhlungu. Mhlawumbi, ngenxa yezenzo ezinjalo umntwana uzama ukuzibamba, ngenxa yokuba uziva ehlala kwintsapho kwaye ebuthathaka. Ukuthobeka kunobuthakathaka - yile ndlela kuphela yoluhlu lwakhe. Kule meko, kufuneka uqale ngokwakho: hlalutya into engalunganga ngobudlelwane bakho nomntwana. Ukuba kunzima ukuyiqonda, siyacetyiswa ukuba uqhagamshelane neengqondo zentsapho!
Eyona nto inomdla kwaye ayiqhelekanga ngeentlanzi zasekhaya
Ukunyamekela kweekati, izifo zamakati
Ukwenza uqale ngezandla zakho
Iresiphi yecookie eneengxube
Abalandeli baseUkraine baya kukhansela umtshato kaBrad Pitt no-Angelina Jolie
Ungazichaza njani kumntu ongeva nto kuye?
Iminyaka yobudala: iimpawu zeminyaka
Iimpawu ze-styles eziphambili zeNew New Year 2018 zeenwele ezimfutshane
Iholide igqoke ngokupheleleyo kwiNtsha Yonyaka 2016: ifoto enhle kakhulu
Unyango lwe-sclerosis kunye namachiza omntu
Indlela umfazi oziphatha ngayo namadoda emsebenzini
Amafritter avela kwi-curveti kwi-oven nakwi-pan, enamaqanda, encikiweyo, ngeshizi kunye negalikhi
Yintoni engayi kunikwa yosuku lokuzalwa?
Indlela yokwenza iimpepha ze-blondes
Impilo kunye nokubeleka
Isobho se-cream cream kunye ne-shrimps
Ukuphononongwa kwefilimu "Yiza kwiNyanga"
I-tart tream kunye ne-caramel
UBoris Godunov-2, okanye uKsenia Sobchak ulungelelanisa ukuqhuma
Inomdla phambi komhla wokuqala wokuqala